Ronen Nissenbaum: Waldorf iyo hogamiyaha hoteelka Conrad
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » News » Ronen Nissenbaum: Waldorf iyo hogamiyaha hoteelka Conrad
Ronen Nissenbaum wuxuu ku dhashay dhalasho ahaan wuxuuna hada ku nool yahay Atlanta, waa hawl wadeen c-suite leh taxane badan oo guulo ah oo ka soo gaadhay Tel Aviv ilaa Singapore City iyo Euro Disney ilaa iyo
Ronen Nissenbaum oo dhalasho ahaan ka soo jeeda Israel hadana ku nool Atlanta, ayaa ah c-suite fulin leh taxane badan oo guulo ah oo ka soo gaadhay Tel Aviv ilaa Singapore City iyo Euro Disney ilaa guryaha caanka ah ee Waldorf. Aniga oo ku mashquulsan wareysi lala yeeshay hudheelkan xoogga leh, waxaan awooday inaan si sax ah u ururiyo 58 daqiiqo oo ah waqtigii Nissenbaum ee koobkiisii ​​Waldorf Astoria New York Hotel maadaama uu deg deg ku dhex maray New York.
Nissenbaum oo ah ganacsade caalami ah oo leh baasaboor ay tahay inuu lahaado bogag ka badan Dagaal iyo Nabad, Nissenbaum wuxuu u soo bandhigayaa inuu yahay mid hoose, oo qalbi diirran oo dhab ahaantii daboolaya xisaabinta, xariifnimada, go'aan qaataha hamiga leh ee qaadaya dib-u-dhiska platina oo ku dhawaaqaya guulaha.
Nissenbaum wuxuu hadda ka yahay dhawaqa howlaha, Luxury Hotel-America oo ay weheliso Hilton Worldwide. Isagu waa qofka u tagaya hawlgallada ay ka mid yihiin Waldorf Astoria Hotels iyo Resorts iyo Conrad Hotels iyo Resorts.
War-saxaafadeedka ay soo saartay Hilton, dhiirrigelinta Nissenbaum ee Hawlgallada VP waxaa loo tixgeliyaa inay tahay "kor u kac" boostadan, erey inta badan loogu talagalay shakhsiyaadka u eg Ilaah oo loo qeexay sida, "kor u kaca xiddig ka sarreysa cirifka (xoreynta com); ” qaamuuska Merriam-Webster wuxuu muujiyaa adeegsiga erayga isagoo tixraacaya "u kicitanka madaxtinimada."
Si cad jagadiisa Hilton dhexdeeda waxaa loo arkaa mid aad muhiim u ah waxaana u xilsaaray shirkadaha 'Joe Berger, Madaxweynaha Deegaanka, Ameerika, Hilton Worldwide inay diiradda saaraan, "… labadaba inay helaan guryo dheeri ah ayna hubiyaan martida Waldorf Astoria iyo Conrad inay ku raaxeystaan runtii waaya aragnimo lama ilaawaan ah iyo dhiirigelin huteelladayada ah. ”
Laga bilaabo Bilowga
Nissenbaum wuxuu bilaabay shaqadiisa isagoo kaqeyb galay Switzerland Hotel School, Les Roches (class of 1989), wuxuuna kusii watay waxbarashadiisii ​​Goizueta Business School / Emory University halkaas oo lagu siiyay MBA. Wuxuu sidoo kale waqti la qaatay Ciidanka Cirka ee Israel wuxuuna ahaa sarkaal ka tirsan Ciidamada Difaaca Israel asagoo ah Afhayeenka IDF. Nissenbaum wuxuu ka yimid qoys hudheello leh. Abtigiis ayaa maamuley hudheelka St. Regis ee ku yaal New York iyo qasriga New York muddadii loo yaqaannay The Helmsley Palace iyo The Plaza.
Sida hudheelayaal badan oo xirfadley ah Nissenbaum waxay ka bilaabeen xafiiska hore iyo waaxaha cuntada iyo cabitaanka guryaha ee Belgium, Switzerland iyo Israel. Sanadihii la soo dhaafay wuxuu la xiriiray kooxda InterContinental Hotel Group ee Israel, Berlin, Paris iyo Atlanta wuxuuna xilal sare oo maamul ka soo qabtay hoteellada Forte ee London iyo Euro Disney ee Paris. Markii uu joogay Singapore wuxuu ka shaqeyn jiray Marina Bay Sands dhawaanahan wuxuu ahaa Madaxweynaha iyo Agaasimaha Guud ee The Plaza Group, isagoo kormeerayay NY Plaza Hotel iyo horumarinta astaanta Plaza Hotel. Sanadkii 2014 wuxuu noqday Maamulaha Guud ee Waldorf Astoria New York iyo Towers-ka Waldorf Astoria New York bishii Nofembar 2015 wuxuu u dhaqaaqay booska cusub ee la abuuray ee Hawlgallada VP.
Guushii ugu dambeysay ee Nissenbaums waxay kaqeybqaadaneysaa iibinta NY Waldorf ee Anbang Insurance Group Co. Ltd (PRC) kudhowaad $ 2 bilyan. Si heshiisku u noqdo mid aad u xiiso badan wuxuu ku xiran yahay qandaraas adeeg maamul oo lala galo Hilton Worldwide Holdings oo socon doonta 100 sano. Heshiiskani wuxuu la jaan qaadayaa istiraatiijiyadda Hilton "capital-lite" ee ay ku maamusho hudheelada, iyada oo lacag ah, oo ay dhisteen oo ay leeyihiin dad kale.
Albaabka Waldorf Astoria New York Park Avenue
Anbang La Xiriira
In kasta oo Anbang laga yaabo in aan lagu xusin dalka Mareykanka, haddana waxaa caan ka ah Shiinaha sida Guddoomiyaheeda iyo Agaasimeheeda, Wu Xiaohui, uu qabo inanta Deng Xiaoping (Deng ayaa ku dhiirrigelisay furitaanka Shiinaha ee Galbeedka Diseembar 1978 - 1992), sida laga soo xigtay Alison Tudor-Ackroyd oo ka tirsan Maaliyadda. Intaa waxaa dheer, Chen Xiaolu, ina Chen Yi, oo ah taliye sare oo millateri oo ka hooseeya Mao, waa Agaasime halka Levin Zhu, ina Zhu Rongji, ra'iisul wasaarihii hore ee Shiinaha iyo bangiga guuleystey, uu weheliyo.
Anbang ma ahayn qofka kaliya ee u tartamaya hantidan koobkan laakiin wuxuu awood u yeeshay inuu garaaco laba iibsade oo kale, mid ka yimid Mareykanka iyo mid kale oo ka yimid Bariga Dhexe. Dalabkii la aqbalay (oo la xiray 2015) wuxuu sare u qaaday sumcadda shirkaddan caymiska. Qaarkood waxay la yaabeen $ 1.95 bilyan oo doolar - waa iibkii ugu weynaa abid ee hudheel Mareykan ah iyo iibsigii ugu weynaa ee Mareykanka ee iibsade Shiinaha ah. Qiimaha hudheelka 1,413 ayaa ka dhigan in Anbang uu ku kacay qiyaastii $ 1.4 milyan qolkiiba. Hantida ma guurtada ah qaar ka mid ah waxay tixgeliyaan iibsiga sidoo kale waxay la kulmeen tixgelinno aan dhaqaale ahayn sida "barashada hababka ugu fiican, fahamka moodooyinka ganacsiga ee suuqa qaangaarka ah iyo uruurinta khibradaha maaraynta iyadoo loo marayo xiriirka maxalliga ah," sida laga soo xigtay Ross Moskowitz, lammaanaha Stroock & Stroock & Lavan LLP Waaxda Hanti Ma-guurtada iyo sarkaal hore uga tirsanaan jiray Shirkadda Horumarinta Dhaqaalaha Magaalada New York.
Marka lagu daro lacagta la bixiyay ee hantida, maalgashadayaashu waxay la yaabeen muuqaalka iibsadaha maadaama Anbang aan loo tixgelinaynin inuu yahay “miisaan culus suuqyada caymiska Shiinaha” iyo “inuu leeyahay waxoogaa yar boqolkiiba 3.6% suuqyada shirkadaha caymiska gudaha ee Shiinaha,” sida laga soo xigtay Tom Huddleston, Jr. (Fortune.com)
New York Waldorf waa hoteelkii ugu horreeyay ee ay iibsadaan Anbang, laakiin uma badna inuu noqon doono kii ugu dambeeyay. Shirkadan caymiska waxay leedahay 20 milyan oo macaamiil ah adeegyadeeda maaliyadeed iyo caymiska (sida, caymiska nolosha, hawlgabyada, caymiska caafimaadka, caymiska hantida iyo maareynta hantida). Iibsashada, si kastaba ha noqotee, waxay si cad ugu habboon tahay ujeedkeedda hadda jirta oo ah, "in laga faa'iideysto fursadaha ay keeneen isku-xirnaanta dhaqaalaha iyo in macaamiisha adduunka oo dhan la gaarsiiyo adeegyo…." Anbang wuxuu qorsheynayaa inuu kordhiyo maalgashiga hantida caalamiga ah ee Yurub iyo Waqooyiga Ameerika.
Heshiiska ayaa walaac ka muujiyay dowladda Mareykanka waxaana dib u eegis ku sameeyay halista amni ee ka imaan karta Guddiga Maalgashiga Shisheeye ee Mareykanka (CFIUS). Baadhitaanka waxaa keenay xaqiiqda ah in Waldorf Towers (qayb ka mid ah guriga) uu hoy u ahaa Safiirka Mareykanka u fadhiya Qaramada Midoobay iyo meel ay aadaan ciyaartoy waaweyn oo ka tirsan dowladda Mareykanka oo uu ku jiro Madaxweynaha. Wasaaradda arrimaha dibedda ee Mareykanka ayaa kiraysatay qof deggan danjiraha Mareykanka ee UN-ka dabaqa 42-aad ee Dhismayaasha Waldorf muddo ka badan 50 sano. Sebteembar kasta waaxdu waxay qaadataa laba dabaq si ay xarun ugu noqoto diblomaasiyiinta Mareykanka ee ka qeyb galaya Golaha Guud ee Qaramada Midoobay.
Magaalada New York ayaa guuleysatay
Intii uu CFIUS ku mashquulsanaa baaritaanka iibka, maamulka magaalada New York kama aysan hadlin heshiiska. Waxaa la isla dhexmarayaa in aamusnaantaan ay ka tarjumeyso fahamka in NYC ay ka heshay ku dhowaad $ 60 milyan heshiiska oo u dhigma 3 boqolkiiba canshuurta wareejinta ee laga bixiyo macaamillada guryaha.
Iibsiga Anbang ee Waldorf Astoria New York waxaan rajeyneynaa muuqaal cusub oo qolalka iyo meelaha dadweynaha ah iyo sidoo kale fursado lagu iibsado dhismooyinka. Inta soo hartay ee iibinta guriga waxaa loo isticmaali doonaa in lagu daro shan guri oo caan ah meelaha dalxiiska iyo magaalooyinka:
• Hilton Orlando Bonnet Creek oo ku taal Orlando Florida
• Waldorf Astoria Orlando oo ku taal Orlando, Florida
• Gaaritaanka Key West Florida
• Casa Marina oo ku taal Key West, Florida
• Parc 55 ee San Francisco, Kaliforniya (mid cusub oo lagu daray Hilton Hotels and Resorts brand; waxaa maamula Hilton Worldwide; iibsiyo kale oo ay hada maamusho Hilton Worldwide)
Qiimaha $ 1.76 bilyan ee iibsigu wuxuu kordhin doonaa joogitaanka Hilton ee suuqyada dalxiiska ee Florida iyo San Francisco - taas oo loo arko inay tahay suuq koritaan. Isku dheelitirka lacagaha ka soo baxa iibinta Waldorf Astoria New York waxay aadi doontaa iibsashada hanti dheeri ah.
Qoraalkan xuquuqda daabacaadda ah lama soo saari karo ogolaansho qoraal ah la'aan qoraaga.